Isandi - Izilumkisi - on B787 Indlela ukucima?
umbuzo Isandi - Izilumkisi - on B787 Indlela ukucima?
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #475 by FlyingFranz
I nje ilandiwe B787 Dreamliner ukusuka Ricoooo kunye abafake.
Noko ke, xa ukwinqwelo, imiyalezo tufwile isandi phezulu-moya.
Andikwazanga ukufumana apho uvale it.
Andiqondi ukuba le ngxaki kunye nezinye iinqwelo-. Baya nje ukuveza izaziso kwikhusi (asezantsi ekunene.)
Naluphi na uncedo nceda.
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka we-11 inyanga edlulileyo FlyingFranz.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #476 by Gh0stRider203
Mna buqu uzifune luncedo, kodwa yabo nganye, eh?
Ngoko kwakhona, kukho amaxesha andifuni ncam wayethanda "Bitching Betty" lol
kunzima na. goto nje ifolda isandi loo moya ethile, kwaye uhlela ifayile sound.cfg loo moya, ukutshintsha igama lefayili esikhoyo "lefayile = cwaka"
Ukuba ukulungisa oko, ndicinga ... lol musa azicaphule kum ngaloo njengoko andivumeli bazama oku ngaphambili.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: FlyingFranz
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #477 by FlyingFranz
Siyabonga ngokuphendula ngokukhawuleza.
Ndikhe ndazama ... Akukho elungileyo!
Akukho isahluko "izaziso Sound" kwifayile sound.cfg lo moya ethile.
Enkosi nangoku. Ndiza kuzama kwakhona ngokuthelekisa le fayile sound.cfg kunye nezinye iifayile efanayo.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #478 by Gh0stRider203
Mna okunene ke kubhabha i 787 ukulungiselela into elula ukuba akafanelekanga ukuba kwi VA, ngokoluvo lwam buqu. Kuba kum, ukuba konke malunga ukwenza imali, kwaye ngoxa 787 ukuze abe kufutshane obufanayo njengoko 772LR (leyo soba), kodwa ayikwazi ukuthwala inani elifanayo abakhweli njengoko uza kubona kule lwekhusi .. Eyazivulelayo kuthetha $ ngaphantsi ngenxa VA.
Enkosi nalamkelayo: 5
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #498 by Tonny0909
fumana nje ezo iifayile wav- kwi simobjects / ntaka / planename / izandi ze ususe ezo. umzekelo "callout100.wav" njl
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #499 by FlyingFranz
Nangona kunjalo, akukho isandi ngokwayo ukuba okruqulayo, kodwa into yokuba akukho activated kule moya ethile. Andinayo ingxaki kunye nezinye iinqwelo- phantsi FSX.
Xa iifayile B787, kukho enye ikhowudi ebiza ezi zandi siphaphile. kubalulekile kakhulu kuyaphazamisa kuba xa, umzekelo, ukwehla kancinci nje imixawuka kakhulu, tufwile izandi nokuba isantya luchanekile.
Zonke ndikwazi ukwenza ukunciphisa izinga isandi kwi neefayili ezinxulumeneyo kwi engundoqo "Izandi 'ncwadi eneenkcukacha (ukusuka 10000 ukuya 6000.)
iinyanga 5 4 iintsuku ezidlulileyo #1211 by FlankerAtRicoo
Sebenzisa i- [gpws] kwi-aircraft.cfg
Ukuba akukho nxalenye ye- [GPWS] yakha enye.
Eli candelo lichaza iinkcukacha zesistim sokusondeza komhlaba.
max_warning_height Ubude obungezantsi apho isilumkiso sisebenza.
sink_rate_fpm Ukuba inqwelo-moya idlula le nqanaba yokuzala isilumkiso senziwe.
i-excessive_sink_rate_fpm Ukuba inqwelo-moya idlula le nqanaba inzala isilumkiso esiphuthumayo senziwa.
climbout_sink_rate_fpm Ukuba iinqwelo-moya ziqala ukuhla ngexesha lokususa, kwaye lidlula le nqanaba lokuzalwa, isixwayiso
flap_and_gear_sink_rate_fpm Ukuba iinqwelo-moya zifika, kwaye zidlula le nqanaba lokuzala ngaphandle kweendwangu okanye ijeythi ezongeziweyo,
; // Le Diables 'ayiyi kucima', 'i-flaps ephantsi kakhulu', njl
; // Ulungelelaniso lwe & & Siyabonga kuRob Barendgret
Ixesha ukwenza page: 0.223 imizuzwana